Drill - Daloolin - Wikipedia
Drill - Daloolin
Dhaqdhaqaaqa waa qalab lagu xiro qalabka wax lagu gooyo ama qalabka baabuur wadidda, badanaa marin yar ama darawal wadata, oo loo isticmaalo daloolada cirifka ah ee maaddooyinka kala duwan ama isku xirxirida walxo kala duwan. Xiriirinta waxaa lagu jajabiyey foori ah hal dhinac oo ka mid ah matoorka oo loo rogay markii loo cadaadiyey alaabta bartilmaameedka. Caarada, iyo mararka qaarkood geesaha, ee qalabka jarida ayaa shaqeynaya jarista qalabka bartilmaameedka. Tani waxay ka dhigi kartaa shinbiraha khafiifka ah (mashiinka dhoobada ama qashin-qubaha), ka gooyaan qaybo yaryar (qodidda saliidda), burburinta iyo ka saara qaybo ka mid ah shaqada (SDS-ta sameyska), saldhigga, ka hortagga, ama hawlaha kale.
Maareynta waxaa badanaa loo isticmaalaa dhirta, shaqada birta, dhismaha iyo mashaariicda sameeya. Layli khaas ah oo loo qaabeeyey ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada, xafiisyada boosta iyo codsiyada kale. Mashiinnada waxaa lagu heli karaa sifooyin badan oo kala duwan, sida awooda iyo awooda.
Mashiinka mashiinka weyn ee mashiinka waa mishiinka mashiinka lagu rarayo oo loogu talagalay qodidda qodobbo culus oo culus oo culus kuwaas oo ay adagtahay in la guuro ama la keeno mishiinka qumman ee caadiga ah. Waxay leedahay saldhig mammuumad ah oo la marsiiyo godad iyada oo la adeegsanayo qalabka jarista sida qalabka xayawaanka ah (jaranjarada) ama qashinka bareebka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ku xiran hawlgalladooda iyo takhasusyada sida mashiinnada moobjirta qashinka, qashin-qubka, pneumatic, xajmiga hareeraha, quudinta tooska ah, saldhigga xakamaynta iwm.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa mashiinka mashiinnada mashiinka culus, mashiinka mashiinnada mashiinka saldhigga mashiinka, mashiinka mashiinka saldhigga mooska, saldhig magaalo, mashiinka gawaarida mashiinka, mashiinka dhoobada culus ama dhoobada.
Cabbiraadda mashiinka (oo sidoo kale loo yaqaanno mashiinka lugta, mashiinka dharka, ama kursiga keydinta) waa qaab go'an oo la marsiiyo oo laga yaabo in lagu rakibo kursi ama daboolan karo dhulka ama goobta shaqada. Moodooyinka la qaadan karo ee leh saldhig mammuriga ah ayaa qabsanaya waxyaallaha birta ee ay mari karaan. Tikroolajiga miisaankiisu wuxuu ka kooban yahay salka, tiir (ama tiir), miis, xargo (ama buste), iyo madaxa dharka, sida caadiga ah oo ay ku kacdo mashiinka induction. Madaxa waxaa ku jira qaybo gacan qabasho ah (sida caadiga ah 3) oo ka soo baxaya xarun dhexe oo, marka la jeesto, u wareegto xargaha oo si qoto dheer u xoqdo, si la mid ah calaamadda tiirarka. Tilmaamaha matoorka ayaa sida caadiga ah lagu qiyaasaa marka loo eego gawaarida. Gawaarida waxaa lagu qeexaa laba jeer oo ah masaafada dhuunta, taas oo ah masaafada u dhexeysa bartamaha xargaha ilaa dhinac ugu dhow tiirarka. Tusaale ahaan, saxaafadda 16-inch (410 mm) ee mashiinka matoorka ayaa leh 8-inch (200 mm) oo masaafada u dhexeysa.
Sargaal matxaf ah wuxuu leeyahay tiro ka mid ah faa'iidooyinka badan ee la dhigo dharka la qabtay: Dadaqad yar ayaa looga baahan yahay si aad u dalbato dharka shaqada. Dhaqdhaqaaqa xayawaanka iyo xargaha ayaa waxaa ka mid ah kabaal ka shaqeynaya rack iyo bootin, taas oo siinaysa adeegbixiyaha faa'iido farsameed leh.
Miisku wuxuu u oggolaanayaa dalxiis ama xarig si loo isticmaalo si loo jiheeyo oo loo xakameeyo shaqada, iyada oo hawlgalku sii wanaajinayo.
Qodobka xargaha waxaa loo dhigaa qiyaasta miisaska, taas oo u ogolaanaysa godadka in si sax ah loo daadiyo si joogto ah.
Cabbiraadda mashiinka ayaa mar walba la qalabeeysan yahay mishiinno awood leh oo badan marka la barbar dhigo tijaabooyinka gacanta lagu qaato. Tani waxay u suurtageli kartaa maro weyn oo loo isticmaalo in la isticmaalo sidoo kale waxay kordhisaa ilaa qodista yar yar.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Drill_-_Daloolin&oldid=221576"
Last edited on 26 Oktoobar 2021, at 13:21
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 13:21.